‘चोलेन्द्र शमशेर कमरेड ओलीको फोटोकपीबाहेक केही पनि होईन्, उहाँसँग विनोद चौधरीको भन्दा बढि पैसा छ भनेर चर्चा चलेको छ’ : डा. दिनेश त्रिपाठी « रिपोर्टर्स नेपाल
‘चोलेन्द्र शमशेर कमरेड ओलीको फोटोकपीबाहेक केही पनि होईन्, उहाँसँग विनोद चौधरीको भन्दा बढि पैसा छ भनेर चर्चा चलेको छ’ : डा. दिनेश त्रिपाठी
काठमाडौं, २९ कार्तिक । बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले केपी ओलीकै शैली अपनाएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘हिजो ओलीले पनि भिजेलान्ते प्रयोग गरेकै हो। अहिले ओलीकै शैली चोलेन्द्र शमशेर जबराले अपनाएका छन् । चोलेन्द्र शमशेर कमरेड ओलीको फोटोकपीबाहेक केही पनि होईन् । उहाँसँग रचनात्मक दिमाग छैन् ।’ उनले बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्न ढिलो गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘जब उहाँ असंवैधानिक रुपमा बोलाईएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जानुभयो, त्यतिबेला नै मैले उहाँको राजीनामा मागेको थिएँ । म त निरन्तर बोल्दै आएको छु । बारले आन्दोलनमा ढिलाई गर्यो, यो सत्य हो ।’
उनले अहिले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग विनोद चौधरीको भन्दा बढि पैसा छ भनेर चर्चा चलेको पनि स्मरण गराए । उनले भने,‘यो कुरा सुन्दा हाम्रो कान नै अपवित्र हुन्छ । यो चर्चा चल्नु आँफैमा पनि प्रधानन्यायाधीश या कुनै पनि न्यायाधीशको पद विवाद भन्दा मुक्त हुनुपर्छ । यत्रो हाई भोल्टेज कन्ट्रोभर्सीमा परेपछि संसारमा कुनै पनि प्रधानन्याधीश पदमा बस्दैनन् । प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोज्ने, राजदूत र संवैधानिक निकायमा भाग खोज्छ र ? संविधान र विधिको शासनको रक्षक हुनुपर्ने होईन ? आम नागरिक जनताको शीर निहुरिएको छ। उहाँले त संस्थाको अपमान गर्नुभयो । मयर्दामाथि अपमान गर्नुभयो । अदालतमा प्रहरी र शक्ति प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यो अदालतको अवहेलना हो ।’
उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूमाथि लागेको आरोप फेश गर्ने क्षमता नभएर शक्तिको सहारा लिएको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘हिजो ज्ञानेन्द्रले पनि कु गरेका थिए, सेना परिचालन गरेका थिए । उनी समाप्त भए । त्यो बेलामा पनि प्रतिकार समिति बनाईएको थियो । हाम्रो आन्दोलन सत्य र नैतिकतामा आधारित छ । यसको नैतिक शक्ति छ । उहाँ त केपी ओलीकै मतियार हो । अहिलेको आन्दोलन सेवाग्राहीको लागि हो । न्यायालयमा न्याय किनबेच गरिनुहुँदैन्।’
उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेट्नु नै अशोभनीय भएको सुनाए । उनले भने,‘यही आधारमा पनि उहाँले पदत्याग गर्नुपर्छ । पद त्याग गनुपर्ने एक हजार कारण छन् । उहाँ त हिजो संसद् विघटनको बेलामा पनि बेन्चमा अल्पमतमा पर्नुभयो । एक्सपोज हुनबाट रोक्नको लागि फरक मत राख्नुभएन । उहाँको चलेको भए दुवैपटक संसद् पूनःस्थापना हुँदैन थियो।’